अचानक के भयो केपी ओलीलाई? बालकोटबाट आयो यस्तो खबर – Sunaulo Nepal TV
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिरामी परेका छन् । सत्ताबाट बाहिरिएसँगै उनी पार्टीका गतिबिधिमा सक्रिय थिए । उनको स्वास्थ्यमा समास्या देखिएपनि अवस्था भने त्यस्तो चिन्ता गर्नु नपर्ने बालकोटबाट खबर आएको छ ।
पार्टी विभाजनपछि नेता कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा सक्रियता बढाएका ओलीले अस्वस्थ महशुस गरेपछि भेटघाट बन्द गरेका छन् । उनका प्रेस सल्लाहकार रामशरण बजगाईंका अनुसार दैनिक दौडधुपको धपेडीका कारण अध्यक्ष ओली शुक्रबारदेखि अस्वस्थ बनेका छन् ।
बालकोटस्थित आफ्नै निवासमा आराम गरिरहेका ओलीले अत्यावश्यकबाहेक भेटघाट बन्द गरिएको उनले बताए । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीको दुई पटक सम्म मृगौला प्रत्यारोपण गरिएकाले उनी हरेक समय चिकित्सकको प्रतक्ष्य निगरानीमा रहने गर्छन् । पुरानो तस्वीर
Previous भूगर्भविद्ले चेतावनी दिदै भने, ‘अब बुटवलमा पनि मेलम्चीमा जस्तै बितण्डा आउन सक्छ’
Next आइतबारदेखि विद्यालय सञ्चालन हुने??यो निर्णय कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला ‌।